Miyaan ka shaqeyn karaa boggaygayga sida adeeg bixiyaha tamarta casriga ah ee casriga ah?
Sida oo kale sida warshadaha kale, dunidan casriga ah ee SEO ayaa leh isbeddellada iyo dareenka. Dabcan, bixiye kasta oo khibrad raadineed oo khibrad leh ayaa ogyahay dhamaantood, maadaama khabiirada ganacsigu ay kharash gareeyaan maalin kasta oo ganacsi ku shaqeynaya hal arrin - sida loo helo darajo ka fiican, tixgelinta daraasadaha (haddii aanay boqolaal). Intooda badani waxay la xiriiraan saameynta ay bixiso si joogta ah u hormarinaysa hirgelinta google-ka raadinta ee ugu weyn.
Oo waxaan rumaysanahay in ay marwalba socdaan qaar ka mid ah isbeddellada ama nidaamyada SEO-ga ee dhaqameedka si ay u sameeyaan isticmaalka wanaagsan. Oo adiguba maaha cidda aad tahay - mulkiilaha bogga oo dareemaya la'aanta xirfadle xirfad leh, ama webmaster oo diyaar u ah oo diyaar u ah inuu helo qaar ka mid ah xirfadlaha la istacmaalo by kasta oo bixiyaha adeegsashada raadinta sumcadda. Hoos waxaan kuugu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah mashaariicda shaqo ee hadda la helay kuwa ugu caansan bulshada dhexdeeda,. Sidaas, aynu bilowno.
Kumbuyuutarrada ugu caansan ayaa horayba loo yaqaanaa wax kasta oo ku dhow xirfad-bixiyeyaasha raadinta mihnad raadinta maaddaama jawaabo kooban oo ka jawaabaya su'aal, kaas oo badanaa laga helayo korka SERPs. Inta badan, waxaad arki kartaa qashin xarig ah oo ku taal bogga natiijada si loo siiyo qof kasta oo ka mid ah fikradaha la qaadan karo (sida caadiga ah sida qorshe hawleed tallaabo tallaabo ah). Iyadoo la tixgelinayo in waxyaabahaas oo kale ay yihiin kuwo faa'iido leh oo muuqaal ah, aynu isku dayno in aan fahannno caqligooda iyo isticmaalkaas. Xaqiiq ahaan, snippets waxaa laga soo saari karaa Google si fudud oo laga helo bogga internetka kaas oo bixinaya jawaab buuxa oo aan wali laga helin mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee hadda caan ka ah isticmaalayaasha.
Iyadoo la tixgelinayo in qaylo-dhaan ay ka muuqdaan qiyaastii 30% arimahan raadinta oo u dhaqdhaqaaqa sida dib-u-qabadka, taasi waxay noqon laheyd fikrad aad u wanaagsan oo ku socota boggaga internetka si loo geliyo liiska qaar ka mid ah qodobbada qodobbada ee su'aal Ka jawaabida su'aalaha munaasibka ah iyo kuwa hufan. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad maal gashid wakhti aad ku baratid su'aalaha aad ujeeddooyinkaaga ujeeddadoodu ay u badan tahay inaad waydiiso, ka dibna isku day inaad qoratid jawaabta ugu fiican. Sidaa darted, waxaad yeelan doontaa fursado cadaalad ah inaad mar mar wax uga qabato macaamiisha bartilmaameedkaaga.
Laba sano ka hor, Google waxay soo bandhigtay mudnaanta koowaad ee moobiillada ugu sarreeya algorithm. Waqtiga la joogo, mudnaanta koowaad ee qalabyada la qaadi karo waxay noqotey wax dhab ah oo aad u daryeesho sidoo kale sababtoo ah hadda waa rikoodhka raadinta hadda waa qeyb ka mid ah tayada adeegsiga tayada, gaar ahaan marka la fiirinayo qalabka casriga ah iyo kaniiniga. Si aad u sameyso bogag mobile ah si dhakhso ah, Google ayaa dhawaan ku bixisay tiknoolajiyad cusub AMP. Taas macnaheedu waa tartanka ugu sarreeya ayaa u baahan doona website-kaaga in uu hore u socdo habka lagu heli karo nuqul kabadan moobiilka. Hada illaa hadda, waxaan ku talineynaa in aan ogaado habkan cusub. Waxaad si sahal ah u tijaabin kartaa mid ka mid ah Website-ka ugu habboon ee Editing tools oo laga heli karo helitaanka furan.
Mustaqbalku waa horay u soo dhawaynaynaa, waxaanan u baahanahay inaan la qabsado. Waxaan loola jeedaa in hadda raadinta codku wali uu keenayo halkii yar oo wadarta raadinta wadarta. Laakiin waxaan hubaa inaan u baahannahay inaan u dhaqanno sida bixiye kasta oo raadin raadin raadin raadin, maaddaama raadinta codku ay si tartiib tartiib ah u noqoto mid caan ah, oo ay sii korodho hogaamiyayaasha IT-da ee maal-gashaday maalgashiga dhabta ah ee maal-gashiga si ugu dambeyntii loo dhameeystiro horumarinta cod-bixinta Voice oo ay si buuxda u riixayso tiknoolijiyada wax ku oolka ah.
Sidaas, maxaan ka qaban karnaa taas? Ilaa hadda, ma jiraan jawaabo degdeg ah, sidaas darteed waxaan ku talineynaa in aan sii wadno daraasad qotodheer iyo feker ah oo ku saabsan caqabadaha muhiimka ah ee aan si macquul ah u filan karno waqti dhow Source .